September 2019 – Kalfadhi
Xildhibaan Daahir Carab oo sheegay in dadka ku nool Gobolka Gedo ay u baahanyihiin gar-gaar
September 30, 2019 September 30, 2019 Hassan Istiila
Wasiiro, xildhibaanno iyo aqoonyahanno ayaa si weyn uga deyriyay xaaladda abaaraha ka taagan gobalka Gedo iyo deegaanno dhaca dowlad gobaleedka Jubbaland. Mas’uuliyiintaan ayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka ugu baaqay in si dhaqso ah loogu gurmado dad ay la dageen abaaraha. Daahir Carab oo ka mid ah Xildhibaannada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in cod dheer ay ugu sheegayaan dowladda Soomaaliya in dadkaas ay la gaaraan gar-gaar isugu jira raashin iyo biyo dhaamin, maadaama dadku ay dhibaato haysato dadka daga deegaannada uu ka kooban yahay Gedo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda…
Ku-dhowaad 10 xildhibaan oo ka tirsan Golaha Shacabka oo ku xayiran magaalada Kismaayo
Ku-dhowaad 7 xildhibaan oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa ku xayiran magaalada Kismaayo, waxaana ay shegeen in dowladda dhexe ay ku amartay diyaaradaha, haddii siyaasiyiin ay soo-qadaan in shatiyada lagala noqon doono diyaaradaha. Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris, oo kamid ah xildhibaannada ku xayiran sida uu sheegay magaalada Kismaayo, ayaa dowladda-federaalka ku eedeyay in ay ku xad-gudbeyso dastuurka dalka Soomaaliya. Waxaa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in diyaaradaha tagaya kismaayo lagu amray in ay qadaan oo keliya shacabka. Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris, sidoo kale waxaa uu sheegay…
Xil. Magan “Gobolka Gedo waxaa kabilowday dhimashada Xoolaha iyo barakaca Dadka Abaaraha Jira Awgood”
September 29, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Maxamuud Cali Magan oo ka mid ahaa xildhibaano katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kulan kuyeeshay muqdisho ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan gobalka Gedo ay wajahayaan xilligan xaalado adag oo nololeed kadib abaaro ay kudhuftay. Waxa uu sheegay in uusan helin deegaanadaas roobkii lafilayey sanadkan, biyo iyo baad la’aanta kajirtana ay bilaabatay dhimashada xoolaha iyo barakaca reer shacabka guuraaga ah. “Deegaanada xiga bartamaha iyo dhanka fog ee xuduudaha abaartu aad bay u saamaysay waqtigii roobka hadda waa lasoodhaafay bishan ilaa 15 keedee ayaa lasaadaalinayey, Roobkii horena wuuyaraa Sanadkii hore, dhibaatada…
September 29, 2019 September 29, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaa sharci darro ku tilmaamay in dowladda ay ciidanka ilaalada ka wareejiso xildhibaannada. Xildhibaanka ayaa sheegay in askariga uu sifo sharci ah uu kula joogay xildhibaanka, haddii si qasab ahna lagu wareejiyo ay dhibaato tahay. “Marka cabasho noocaan oo kale ah ay jirto kalfadhiga uusan furneyd, waxaa cabasho loo gudbiyaa guddoonka iyo guddiga joogtadda ah”, ayuu yiri. Xildhibaannada ayuu kula dar-daarmay in ay waajibaadkooda gudtaan si ay isugu duubnaadaan. Go’aan Yuu saameynaya ? Xildhibaan Maxamed…
Kalfadhiga 6-aad ee golaha shacabka ee Baarlamaanka dowladda Federaalka ee Soomaaliya, oo lagu waday in uu furmo 27-kii bishan Sept, ayaa dib-u-dhac uu ku yimid. 27-ka bisha, waxaa ay ku beegneyd, maalin jimca ah, inkastoo maalin fasax oo nasiido ay aheyd Jimcaha, haddana shalay oo Sabti aheyd ma uusan furmin shirka. Arrintan ayaa waxaa ka dhashay guux dad-weyne, maadaama aan lasii oggeysiinin baaqashada kullanka. Xeer-hoosaadka Baarlamaanka ayaa dhigayaa in mudanayaasha Baarlamaanka ay leeyihiin afar-bilood oo shaqa ah iyo laba-bilood oo fasaxa ah. Guddiga joogtada ee Baarlamaanka iyo guddoonka, ayaa waxaa…
September 28, 2019 September 28, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaan Maxamuud Diiriye Muuse, oo kamid ah xildhibaannadii doortay madaxweyne Axmed Madoobe, oo ka hadlayay xayiraada dhinaca duullimaad ee ay dowladda saartay Jubaland, ayaa sheegay in go’aankaasi uu saameyn weyn ku yeesha dalka reer Jubaland, sida uu hadalka u dhigay. “Xayiraadii dowladda federaalka ay saartay Jubaland, waxaa ay saameyn xooggan ku leeyahay dadka tabaaleysan ee ku nool Jubaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxa ugu horreysa waxaa waaye dhanka isku-socodka oo aad u adkaaday, waddooyinka oo xun iyo nabad-gelya darrada awgeed dadka markii hore keliya waxaa ay isticmaali jireen diyaaradaha”, ayuu…
Guddoomiye Muudey “Muqdisho yaan laga shaqeysanin, ee haloo shaqeeyo”
Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee golaha Shacabka Soomaaliya, Wasiirka Warfaafinta, Wasiirka Caddaaladda, xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka , xildhibaanno ka tirsan Labada gole ee Baarlamaanka Soomaaliya, Taliyeyaal Ciidan, Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada qalabka sida, xubno ka socday maamulka Gobolka Banaadir iyo ganacsato, ayaa ka qeyb-gallay munaasabad lagu daah-furayay Wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed. Mudane Muudey, oo khudbad ka jeediyay munaasabada ayaa ka hadlay ahmiyada iyo waajibaadka saran ummadda Soomaaliyeed ee ku aadan dib-u-dhiska dalka gaar ahaan caasimada Muqdishu. “Muqdishu yaan laga shaqeysan ee haloo shaqeeyo, marka aan u shaqeyno Muqdishu, oo ay quruxdeeda…
Imisa heer ayuu soo maray Sharciga dhismaha guddiyada la-dagaallanka Musuq-maasuqa?
September 26, 2019 September 26, 2019 Hassan Istiila
Sharciga dhismaha guddiyada la-dagaallanka Musuq-maasuqa, waxaa Golaha shacabka ee Baarlamaanka hor keennay Wasaaradda Cadaaladda, kaddibna waxaa uu maray saddex aqrin. Marka aqrina kowaad la marsiiyay guddiga ku shaqadda leh ayaa lagu wareejiyay, kaddibna waxaa uu guddiga soo diyaariyay aqrintiisa labaad. Sharciga dhismaha guddiyada la-dagaallanka Musuq-maasuqa waxaa uu sidoo kale soo maray aqrin saddexaad, kaddib ayaa loo gudbiyay Aqalka Sare, iyagana intaasi oo kale ayey soo mariyeen sharciga. Aqalka Sare, markii uu soo ansixiyay ,golaha shacabka ayuu usoo celiyay, golah shacabka iygana waxaa ay u codeyeen sharciga, wada-oggol ayey ku codeyeen,…
Guddoomiye ku-xigeenka guddiga Dastuurka “Dhallinyaradda waa in ay door ka qataan dib-u-eegista Dastuurka”
September 25, 2019 Hassan Istiila
Kulan ku saabsanaa sidii dhallinyaradda Gobolka Banaadir ay usoo bandhigi lahayeen afkaartooda ku aadan qabya tirka Dasatuurka oo ka dhacay magaalada Muqdishu, ayaa waxaa ka qeyb-gallay xildhibaannada guddiga Dastuurka ee Aqalka Sare. Dastuurka oo dhawaan la gelin doonno, la tashi dad-weyne oo goboladda dalka oo dhan, ayaa waxaa dib-u-eegista dhankooda ay kasoo dhammaatay guddiyadii u xil-saarnaa dib-u-eegista dastuur. Mumino Sheekh Cumar, oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa banaan ee Dastuurka, oo kulanka ka hadleysay ayaa sheegtay in dhallinyaradda looga baahanyahay in ay door ka qataan dib-u-eegista hadda socoto. “15-kii cutub…
Xildhibaanno dowladda ku eedeyay khiyaano Qaran
September 25, 2019 September 25, 2019 Hassan Istiila
Gellinkii dambe ee shalay magaalada Muqdishu, waxaa kulan ku yeeshay qaar kamid ah xildhibaannada Labada gole ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo dowladda ku eedeyay in ay si bareer ah u baalmartay qodobo kamid ah Dastuurka Ku-meel-gaarka ee dalka u yaalla. Xildhibaannada waxaa ay soo-saareen, warsaxaafadeed ay ku sheegeen in qodobadaasi la baalmaray ay u aqoonsanayaan khiyaanno Qaran, waxaana qodobbada la baalmaray ay ku shegeen. “In dowladda ay hareer-martay qodobadda 10, 12, 21 aad, kuwaasi oo ka hadlaya xorriyadda isu-socodka, xuquuqda iyo karaamada Aadanaha. Sidoo kale waxaa ay…